Barnaamijka tababarka guriga & cuntada ee shaqeeya - Habka Makia
Habka Makia: Waa maxay tababarka adag ee isku-dhafka iyo cuntada ketogenic?
Habka Makia waa codsi jimicsi oo laga sameeyey Finland, kaas oo noqday fikrad caan ah oo ka jirta waddankiisa muddo labo sano ah. Nidaamka wuxuu bixiyaa qorshe jimicsi adag oo laga qaban karo guriga ama qolka jimicsiga. Dhibaatada jimicsiga ayaa si toos ah u kordhisa tababbarka. Habka Makia sidoo kale waxaa ku jira cunto caafimaad oo kumanaan qof oo isticmaala ay heleen miisaankii ugu fiicnaa waxayna hagaajiyeen caadooyinkooda cunidda.
Taariikhda Cunto ee Habka Makia
Waxaan jimicsi jiray noloshayda oo dhan, laakiin da'doodu waa 35 ilaa 40 sano jirka ayaa bilaabay in uu isku uruuro dufanka. Isbeddelka ayaa dhacay isagoo aan la dareemin. Sawir la qaaday maalin qurux badan oo xaga xeebta ah ayaa indhaha ii furay.
Waxaan aad u miisaamey aad u yar, laakiin ka dib markaan arko sawirka waxaan aaday miisaanka oo waxaan ogaaday in aan la yaabay in miisaankeyga si weyn u kordhay. Waxaan la yaabay waxa laga yaabo inay qaldan yihiin.
Waxaan cunay faafin dufan yar, caano fadhi yar, caanaha khafiifka ah, cabitaannada fudud ee macmacaanka ah, caanaha dufanku ku yar yahay, khudradda leh dharka saliida dufan yar, badan oo borotiinka ah iyo hilibka cagaarka ah. Fikradayda, waxaan cunay caafimaad leh, sida waafaqsan tilmaamaha guud. Waxyaabaha khaldan waxay ahaayeen, qalad xun.
Waxaan cabbiray qiimaha baruurta, mana aysan fiicnayn. Kolestaroolka xun wuxuu ahaa mid aad u sarreeya waana mid aad u hooseeya. Ka dib markii la weydiisto talo, waxaan helay tilmaamo ku saabsan sida loo yareeyo dufanka cuntada.
Sidee baan uga sii yareyn karaa dufankayga cuntada? Intaas waxaa sii dheer, qofka i siiyey talada ayaa aad uga culus intii aan ahaa. Dhibaatada ayaa dhalatay.
Ka dib waxaan ka shaqeeyey xirfad halkaas oo aqoonta jireed ee jirka ayaa muhiim ah. Waxaan lahaa waxbarasho wanaagsan iyo aqoonta aasaasiga ah ee xallinta dhibaatada. Waxaan bilaabay in aan sahamiyo xitaa si ka sii fiican ee jirka dheef-shiid kiimikaadka. Waan ogaaday marka jidhku isticmaalo carbohidraatka iyo marka uu gubo dufanka. Waxaan ogaaday in si dhakhso ah ay tahay in cunto karbohideed iyo sare ee borotiinka oo aan lahayn dufan dabiiciga ah uu jidhka ku dhex wadi doono gobolka halkaas oo tamarta oo dhan la soo kabsado iyo baruurta gubanaysa si dhib badan u dhacda. Haddii qiyaasta qiyaasta cuntada ay ka yartahay xitaa wax aad u badan iyo duxdu gubasho ma dhicin, natiijadu waa miisaanka dabiiciga ah ee dabiiciga ah.
Waxaan la kulmay Dr. Cuntada Atkins. Waa arrin murugo leh oo cuncun leh, laakiin fikirka aasaasiga ah waa mid qumman. Iyadoo malaayiin qof oo culeyskoodu dhan yahay adduunka ayaa gaadhay miisaan caadi ah. Jidhku wuxuu ku salaysan yahay cunnooyin oo ku dhowaad dhammaan tamarta laga helo dufanka. Jidhku wuxuu ku jiraa xaalad gubasho joogto ah, miisaanka lumisku way ka dheereeyaa marka la soomo. Nidaamku wuxuu si joogto ah u gubayaa dufanka lagu keydiyo halka hubinta in xaddiga dufanka iyo borotiinku uu ku filan yahay. Intaa waxaa dheer, waxay xaqiijineysaa in aad hesho nafaqo ku filan, kaas oo jirka ka dhigo glucose.
Waxaan bilaabay cuntada Atkins, natiijooyinkuna way yaabeen. Dhowr bilood gudahood, waxaan ka soo saaray dufanka xad-dhaafka ah ee soo ururiyey wax yar. Waan lumiyay in ka badan 33 rodol. Intaa waxaa dheer, waxaan ka saaray finanku wajigeyga oo aan u maleynayey inuu ahaa sababaha neefsashada ee aan u isticmaalo shaqadayda. Waqtigaas, waxaan sidoo kale bilaabay laylinkayga ugu horreeya ee jirka, waxaanan ogaaday inay saameyn ku yeelaneyso dhismaha murqaha.
Habka Makia Got A Inlkial First
Warbaahinta ayaa heshay dhamaantood dhowr sano ka hor oo ku saabsan khatarta caanaha Atkins sababtoo ah waxaa kaliya oo aad cunaysaa hilib doofaar, subag, iyo ukunta. Dad badan ayaa bilaabay "Atkins Diet" iyaga oo ku saleysan xogo yar yar ee macluumaadka, natiijaduna ahayd in dukaamada ay ka soo baxeen subagga. Si kastaba ha ahaatee, aasaas aqooneed oo wanaagsan, si kastaba ha ahaatee, cuntada ketogenic waa mid aan ku guulaysan, natiijooyinkuna waa kuwo xun ama qatar ah. Cuntada Atkins waa ketogenic, haddii si habboon loo raaco, waxaad isticmaashaa khudaar badan, qadar qadar ah oo borotiinka ah iyo xaddiga ku filan ee dufanka wanaagsan.
Si kastaba ha ahaatee, habka Makia ee cuntada ketogenic waxaad cuni kartaa ku dhawaad ​​cunto kasta oo saafi ah, marka laga reebo carbohydrates fudud. Xaddiga khudradu waa had iyo jeer waa saxan kala badh, sidaas awgeed saamigoodu aad ayuu uga sareeyaa cuntada caadiga ah.
Sanado badan ayaan tijaabiyey si aan u hagaajiyo cuntada ketogenic. Shaqadayda sababtoo ah waxaan fursad u helay inaan helo qiimo dhab ah oo dhiigga ah. Habka Makia Reboot waa barnaamijka ugu dambeeyay ee barnaamijka luminta miisaanka ketogen. Waxay asal ahaan ka timid habka Atkins, laakiin waxay leedahay horumarin wax ku ool ah oo keena baruurta gubta xitaa waxtar badan.
Habka Makia Reboot waa, sidaas darteed, cunto ketogenic ku meel gaar ah oo aad lumiso miisaanka. Markaad eegto miisaanka ugu fiican, waxaad tagi doontaa nidaamka caadiga ah ee Makia aasaasiga ah ee ku habboon qoyska oo dhan.
Dhibaatada mashaariic kala duwan oo miisaan kala duwan waxay inta badan ka kooban tahay xaqiiqda ah in qof qoyska ka mid ah uu u baahan yahay inuu diyaariyo oo uu miisaamo cuntada. Habka Makia ee cuntada aasaasiga ah waxaa loogu talagalay in qoyska oo idil cunaan isla cunto. Haddii qaar ka mid ah xubnaha qoyska ay isku dayaan in ay gaaraan xaalad ketogenic ah, isaga ama iyadu waxay ka baxaysaa qayb ka mid ah carbohydrate gooni ah. Haddii kale, cuntadu waa isku mid dadka oo dhan.
Sanadihii ugu dambeeyay waxaan soo saarey habka Codsiga Makia ee shabakadda. Muddo sanado ah, waxaan raacay nidaam la mid ah mawduuca Macia Makia ee cuntooyinka asaasiga ah, laakiin bilawga shaqadan weyn, waxaan si ula kac ah ugu darey carbohydrates fudud sida bunska, rootiga fudud, baradho, macmacaan, iyo sidoo kale waxaan ka tagay ku daridda saliidda. Si kastaba ha noqotee, miisaankeyga korodhka wuxuu ka soo baxay gacanta wuxuuna ka kacay 183 rodol illaa 208. 6 rodol sanadkii. Ujeeddadaydu waxay ahayd in la tijaabiyo hawlaha cuntada ketogenic ee ugu dambeeyay. Dhibaatooyinka carbohydrateska fudud waxay ahaayeen kuwo aad uga xoog badan intii la filayay, iyo in la xakameeyo lacagtooda ay adag tahay. Natiijadu waxay ahayd mid aad u adag oo aan ku talo galay.
01. 01. 2015 Waxaan bilaabay Habka Makia Dib u Furiinka. Muddo laba bilood ah miisaankayga ayaa hoos u dhacay 176. 4 rodol, sidaas daraadeed barnaamijkaygii ugu dambeeyay ee barnaamijka miisaanka lumisku waa mid aad waxtar u leh. Qodob 32. 2 rodol laba bilood gudahood! Muuqaal aad u weyn, laakiin intii lagu jiray miisaankii lumay, xitaa marnaba ma dareemin gaajo. Jidhkaygu marwalba wuu helay tamar igu filan waxaanan dareemay hab wanaagsan. Sidoo kale waxaan si joogta ah u sameeyaa habka Makia. Inta lagu jiro cuntooyinka ketogenic, dadka si caadi ah ayey u dhaqmi karaan.
Aqoonsashada aqoontu waa lagama maarmaan ka hor inta aan la bilaabin Habka Dib u Dhiska Makia. Xogta macluumaadka ayaa sharraxaysa dhammaan xaqiiqooyinka aad u baahan tahay si aad u bilowdo barnaamij miisaan culus oo ketogen ah. Barnaamijka miisaanka miisaanka ketogenic, marka si hagaagsan loo hirgeliyo, waa amaan iyo waxtar badan. Si kastaba ha noqotee, iyada oo aan haysan aqoon aqoon iyo ballanqaad wanaagsan, waa in aadan xitaa bilaabin.
Sidoo kale, waxaa muhiim ah in aadan u baahneyn inaad bilowdo cunto ketogenic ah haddii aad leedahay miisaan caadi ah. Xaaladdaas, jirkaagu si fiican ayuu u shaqeeyaa, uma baahnid nidaamkii Makia Dib u soo celinta, laakiin kaliya cuntada aasaasiga ah ayaa ku filan si loo yareeyo rabitaanka macmacaanka iyo in la yareeyo dareemada gaajada.
Ugu dambeyntii, waxaan soo jeedin doonaa mid ka mid ah raggii ugu da'da yaraa oo idil, oo ereygaygu ahaa mabda'a hagaya ee diyaarinaya qorshahan macluumaadka.
"Haddii aadan sharaxaad ka bixin karin arrinta, ma ogaan kartid ku filan. "
J. A Source . Ciriiri, aasaasaha Habka Makia